Ciyaaraha Star Wars oo iib ah iOS iyo Mac | Wararka IPhone
Ciyaaraha Star Wars oo iib ah macruufka iyo Mac
Taageerayaasha Star Wars (horey loogu yaqiinay Star Wars) ayaa nasiib leh. Haddii aan dhowr bilood uun naga maqnaano soo bandhigga qaybta cusub ee "The Force Awakens", oo tiyaatarada saari doona dhammaadka sannadaha, hadda waad ku raaxeysan kartaa cayaaraha ugu fiican ee taxanaha macruufka iyo Mac qiimo aad u sarreeya sida dabaaldeg ka hor maalinta xigta ee Dagaallada Xiddigaha oo dhici doona 4-ta Maajo. Thanks to dalabkan waxaad heli kartaa cinwaanno sida "Star Wars Knights of the Old Republic" oo loogu talagalay macruufka iyo Mac qiimo weyn. Waxaan ku tuseynaa dhammaan dalabyada hoose.
Maalinta Dagaallada Xiddigaha (Star Wars Day) waxaa loo dabbaaldegaa 4ta Maajo, taariikhda la xuso in lagu sameyn karo ruwaayad ku saabsan ereyada af Ingiriiska Kii afraadna ha kula jiro (May 4 way kula joogi) waxay aad ugu egtahay weedha caanka ah ee "May the Force be with you" (Xoogga ha kula jiro). Waxaa la bilaabay 2011, maalintaas baaritaano gaar ah oo lagu sameeyay filimada saga ayaa lagu sameeyay shineemooyinka, iyo tartamada dharka. Joogitaanka ciidaan shabakadaha bulshada ayaa sii kordheysa saameynteeduna waa mid horeyba adduunka uga jirtay.
Haddii aan u socono waxa na xiiseynaya maqaalka, waa fursadda ugu fiican ee aan ku soo dejisan karno ciyaarta aadka u fiican "Star Wars Knights of the Old Republic" ee loogu talagalay IOS, taas oo Waxaa badanaa lagu qiimeeyaa € 9,99 oo hadda loo dhigay € 2,99.
Haddii aad tahay isticmaale Mac sidoo kale nasiib baad ku jirtaa, maxaa yeelay waxaa jira shan cinwaan oo hoos loo dhigay kala bar qiimaha ay ku jiraan, kuwaas oo aan anigu shaqsiyan u muujiyo "Star Wars Empire at War", mid ka mid ah cayaaraha aan ugu jeclahay iyo sida xaqiiqada ah kuwa jecel istiraatiijiyadda waqtiga dhabta ah. ciyaaraha. Waxaan idinkaga tagayaa dhamaan xiriiriyeyaasha hoose.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPad » Ciyaaraha Star Wars oo iib ah macruufka iyo Mac
10ka tweaks ee aadka loo doonayo ee isticmaala Apple Watch